စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို သက်သာစေမယ့်နည်းလမ်းများ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို သက်သာစေမယ့်နည်းလမ်းများ
လူအတော်များများမှာ Tension Headache လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ခေါင်းကိုက်တာကို ခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။ ခေါင်းနှစ်ဖက်လုံးက ကိုက်တတ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ဇာတ်ကြောပါ တက်တတ်ပါသေးတယ်။ အများစုမှာ2နာရီ၊3နာရီအတွင်း သက်သာတတ်ပြီး ကံကောင်းသူတချို့မှာ မိနစ်အနည်းငယ်မျှသာ ကြာတတ်ပါတယ်။
ဒီလို ခေါင်းကိုက်တာကို ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး တစ်နေ့တာကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး၊ အေးအေးချမ်းချမ်း စိတ်ဖိစီးမှုကင်းစွာနဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့အတွက် လျှို့ဝှက်နည်းလမ်းလေးတွေ ဖွင့်ဟပေးလိုက်ပါတယ်။
1. ညဘက်မှာ ကောင်းကောင်းအိပ်ပါ။
ဖိစီးမှုကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းထဲမှာ အိပ်ရေးမဝခြင်းကလည်း တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က လုံလောက်တဲ့ အနားယူမှုမရတဲ့အခါ ကိုယ်တွင်း အစိတ်အပိုင်းတွေအပေါ် ဖိအားတွေ သက်ရောက်ပါတော့တယ်။ ညဘက်မှာ ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ ပုံမှန်အလေ့အကျင့် လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လူတွေဟာ အလေ့အကျင့်ပေါ်မှာ အမှီပြုနေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးငယ်လေးတွေလိုပဲ အိပ်ခါနီးအချိန်မှာ စိတ်ကို လျှော့ချပြီး အိပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီလို ညဘက်မအိပ်ခင် စိတ်ဖိစီးမှု ဖြေလျော့တဲ့နေရာမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူတတ်ပါဘူး။ တချိုက စာအုပ်ဖတ်ခြင်းဖြင့် အပန်းဖြေတတ်သလို တချို့က ရေနွေးလေး စိမ်ချိုးရတာ ကြိုက်တတ်ကြပါတယ်။ တချို့က သီချင်းအေးအေး နားထောင်ပြီး အိပ်တတ်သလို တချို့က အမွေးနံ့လေးထွန်းပြီး အိပ်တတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့နည်းကို အသုံးပြုပြီး စိတ်ကို ဖြေလျှော့ဖို့ ကြိုးပမ်းသင့်ပါတယ်။
2. စိတ်ပျော်ရွှင်စေနိုင်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေထွက်အောင် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပါ။
စိတ်ပျော်ရွှင်စေနိုင်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေ များများထွက်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုထွက်လာဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး မိနစ် 30 ခန့် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
3. ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် စားသောက်ပါ။
ဖိစီးမှုကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို သက်သာစေဖို့ သကြားနဲ့ ကဖိန်းဓာတ်စတာတွေကို ရှောင်ရှားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုအစားအသောက်မျိုးက ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ဟော်မုန်းနဲ့ ခွန်အားတွေကို ယုတ်လျော့စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာ ပင်ပန်းလာတဲ့အခါ အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းလည်း နည်းပါးလာပါတယ်။ အမှား ပိုလုပ်လာနိုင်ပြီး စိတ်တွေ ပိုရှုပ်ထွေးလာနိုင်ပါသေးတယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေ စားသောက်တဲ့အခါ သံဓာတ်၊ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း စတဲ့ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ အကုန်ရရှိနိုင်တဲ့အတွက် ခွန်အားပြည့်ဝတဲ့အပြင် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုလည်း ကောင်းစေပါတယ်။ ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်း အားပေးပါသေးတယ်။
စိတ်ဖိစီးခေါင်းကိုက်မှုကို သက်သာစေရန် ကိုယ်အလေးချိန်လည်း လျှော့ချဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
4. အရောင်ကျစေတဲ့ အစားအစာများ ပိုစားပေးပါ။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာလို့ဆိုရာမှာ အရောင်ကျစေနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ငရုတ်ပွသီးတွေကို ထည့်စားသင့်ပါတယ်။ ဒီအစားအစာတွေဟာ အရောင်ကျစေတဲ့အပြင် အခြားဖျားခြင်းနာခြင်းတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
5. အလုပ်မှ ခေတ္တအနားယူပါ။
စိတ်ဖိစီး ခေါင်းကိုက်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ အလုပ်က ထိပ်ဆုံးက ပါနေပါတယ်။ အလုပ်မလုပ်ဘဲလည်း အသက်မရှင်နိုင်တဲ့အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချဖို့အတွက် အလုပ်ကနေ ခေတ္တခွင့်ယူပါ။ တချို့မှာ စိတ်ဖိစီးမှု များလာရတာဟာ နားချိန် ကောင်းကောင်းမရလို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်နေ့လုံး ခွင့်ယူပြီး မိသားစုနဲ့ အနားယူတာမျိုး ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
အလုပ်ကနေ ခွင့်ယူလို့မဖြစ်တဲ့အခါ အလုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို ခံစားနေရတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုအကြာင်းကို ဖွင့်ပြောပြပြီး ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ဖြေလျှော့သင့်လဲဆိုတာ မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ လိုအပ်တယ်ဆိုရင် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချနိုင်ဖို့ အလုပ်ပြောင်းဖို့တောင် စဉ်စားသင့်ပါတယ်။ နာရီနဲ့အမျှ ခေါင်းကိုက်နေတာကို လျော့နည်းစေလာပြီး ခေါင်းကိုက်တဲ့အကြိမ် လျော့နည်းလာတာကို တွေ့ရမှာပါ။
6. စိတ်အပန်းဖြေ နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေကြည့်ပါ။
စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကို မဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အခါ စိတ်ဖိစီးမှုကို အခြားနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပယ်ဖျောက်ဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ လူအများစုအတွက်တော့ တရားထိုင်ခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးသော စိတ်အပန်းဖြေနည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တရားထိုင်ရာမှာ စိတ်အားအနည်းငယ်စိုက်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ တချို့တွေကတော့ ယောဂကျင့်ခြင်းက စိတ်အပန်းပြေစေနိုင်တယ်လို့ ဆိုကြပါသေးတယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကို ဖြစ်စေပြီး စိတ်လက်ပြေပျောက်ကာ အသက်ရှူခြင်းကို မှန်ကန်ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ အောက်ဆီဂျင် ပိုရရှိအောင် အသက်ပြင်းပြင်းရှူခြင်းဖြင့်လည်း စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်တိုဒေါသထွက်ချိန်နဲ့ အခြားခေါင်းကိုက်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာချိန်မှာ အသက်ပြင်းပြင်းရှူပြီး စိတ်လျှော့သင့်ပါတယ်။ အသက်ဝဝ ရှူလိုက်ချိန်မှာ ကြွက်သားတွေနဲ့ ဦးနှောက်က လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ကို ရရှိစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ပျော်ရွှင်စေနိုင်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေကို ထွက်လာစေနိုင်ပါတယ်။
7. ကိုယ်နေဟန်ထားကို ပြင်ဆင်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထားကို ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်နေဟန်ထား မှားယွင်းနေသူတွေမှာ လည်ပင်းနဲ့ ခါးမှာ ဒဏ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် သတိပြုသင့်ပါတယ်။ မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာ ရင်ကိုကော့ ခါးကိုမတ်ထားရပါမယ်။ ထိုင်နေတဲ့အချိန်ဟာ ကိုယ်ဟန်အမှားတတ်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ခုံမှာထိုင်တဲ့အခါ ခြေပစ်လက်ပစ် ကုန်းပြီး ထိုင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခါးရဲ့ကွေးရာအတိုင်း အလိုက်သင့်ဖြစ်စေဖို့ ခါးနောက်မှီအခံလေးနဲ့ ထိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှ နောက်ကျောကြွက်သားတွေ ဒဏ်မဖြစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ထိုင်တဲ့အခါ ခြေနှစ်ဖက်ကိုချပြီး မတ်မတ်ထိုင်ခြင်းက အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာစားပွဲမှာ ထိုင်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ကို မျက်လုံးနဲ့ တစ်တန်းထဲထားမှသာ လည်ပင်းဇက်ကြောတက်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ပြီးချိန် ညဘက်ရောက်တဲ့အခါ လည်ပင်းကို ဘယ်ညာစောင်း အကြောဖြေလိုက်ပါ။ ဒါမှ တောင့်တင်းနေတဲ့ အကြောအခြင်တွေပြေပြီး ညဘက်မှာ ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
>> စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ
လူအတော်များများဟာ စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်တွေကို မသိလိုက် မသိဘာသာနဲ့ ခံနေရတတ်ပါတယ်။ ဖိစီးမှုများခြင်းကြောင့် ခေါင်းကိုက်တဲ့အခါ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချရုံတင်မကပါဘူး။ အစားအသောက် အနေအထိုင်ကိုလည်း ပြင်ဆင်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအချက်7ချက်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရုံနဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်း ကင်းဝေးပြီး သာယာတဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။
ဒါပေမဲ့ ဒီအချက်တွေ အကုန်လုံးကို တစ်ပြိုင်နက် လုပ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းက စိတ်ဖိစီးစေပြီး မူလရည်ရွယ်ရင်းကို ပျောက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ကြိမ်မှာ တစ်ခု စလုပ်ပါ။ ပထမအပတ်မှာ အစားအသောက်ကို ပြောင်းလဲပြီး2ပတ်၊3ပတ်အကြာမှာ လေ့ကျင့်ခန်း စပြုလုပ်ပါ။ အချက်7ချက် ပြည့်သည်အထိ တဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးသွားပြီး ခေါင်းကိုက်ခြင်း ပျောက်ကင်းအောင် ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။